Kusarudzwa kwemashoko ekugadzirisa aJune | Zvazvino Zvinyorwa
June, mwedzi mutsva uye kuverenga kutsva kwakasiyana siyana kuti tiende pazororo rinotevera. Yenyaya dzakasiyana, iyi ndeyangu kusarudzwa kwemazita matanhatu yezvakaitika kare, nhema, zvakavanzika uye zvinotyisa zvinyorwa uye yekufungidzira yekufungidzira kweiyo yakasarudzika nyeredzi yemufirimu uye mukadzi akangwara aive Hedy Lamarr.
1 Minda yekubwinya - Pedro Santamaria
2 Kufungidzira - Rosa Blasco
3 Mushure - Stephen King
4 Varapi - Emanuela Valentina
5 Pakati pehusiku - Mikel Santiago
6 Kusakwana Kushushikana - Roberto Lapid
Minda yekubwinya - Pedro Santamaria
Pedro Santamaría anopa runyorwa nyowani kana yekupedzisira ichiri yazvino, Saga reRoma. Zvinotidzosera kuAntiquity kuti utiudze imwe nyaya yakaiswa mugore 450 AD c. Huns dze Attila ivo vakunda uye vakakunda zvakare uye zvakare Humambo hweKumabvazuva hweRoma, uhwo hwatova panyasha dzavo nekuvapa mutero kwavari.
Flavio AecioMukuru wemauto ekuMadokero, zviri pachena kuti munguva pfupi ichava nguva yavo. Uye zvakare, iro rakapfuma purovhinzi yeAfrica yawira mumaoko eVandals, Swabians neBagaudas vatora. Spain uye maGoth akagadza humambo hudiki hwakakomberedza Toulouse. Pamusoro pazvose, muRavenna, iripi dare remambo revasina simba Valentinian III idendere rekurangana nekutengesa. Saka Aetius anoziva kuti kana paine mukana wekuponesa izvo zvasara zveRoma, achafanirwa kuita chibvumirano nevaimbove vavengi vake, ivo Theodored's goths, kutarisana nemhomho yaAttila.
Kufungidzira - Rosa Blasco
Rosa Blasco anobva kuAlcañiz anobva kuTeruel, kunyangwe achishanda sachiremba wemhuri muTudela, basa raanobatanidza nemabhuku. Akanyora Iyo sanatorium yeProvence y Ropa risiri iro. Uye ikozvino anounza iyi nyowani nyowani nevaviri protagonists, the forensic Simonetta brey uye komishina Dario Ferrer, ndiani achafanira kuongorora nyaya dzevamwe vakauraya vanachiremba muMenorca.
Pashure - Stephen King
Mazuva aya angavei asina bhuku ra Stephen King? Saka kunoenda uyu umpteenth zita iro nyeredzi Jamie conklin, mwana mumwe chete waamai vasina murume, uyo anongoda kuva neuhwana hwakajairika. Asi zvinoitika kuti akazvarwa aine kugona kunoshamisa izvo zvinokutendera iwe kuti uone izvo zvisina munhu anogona uye uwane izvo izvo zvimwe zvepasirese zvisingazive. Nekubatana pamwe nemuongorori kubva kuNew York Police department, uyo anokumanikidza kuti udzivise iyo ichangoburwa mhondi kurwisa kutyisidzira kurwisa kunyangwe kubva muguva, Jamie anogona kubhadhara mutengo unorema wesimba iro.
Varapi - Emanuela Valentina
Isuwo tine izvi thriller yakaiswa kuchamhembe kweItaly. Tiri muna2019 mutaundi diki mumakomo anoungana kuchema kurasikirwa kwemusikana ane mapfupa akawanikwa musango, makore makumi maviri nemaviri mushure mekushaikwa kwake. Zvinosvika kwaari Sara romani, akabudirira ekuvhiya oncologist, uyo anga asati adzoka kubva paudiki hwake uye ikozvino akabatanidzwazve neyekare kubva kwaakatiza. Asi ipapo inopera mumwe musikana akafona Rebecca, ndiani mugari wenhaka yekupedzisira kutsika yekare yevarapi. Uye Sara anofanirwa kusiya pfungwa dzake dzekuongorora kumashure kuti aone kuti chii chingave chakaitika.
Pakati pehusiku - Mikel Santiago
Michael Santiago dzokera ku Ilumbe, iro rekufungidzira guta reBasque Nyika kwaakange atoisa kare nhaurwa yake, Murevi wenhema. Iye zvino zvinotidzosera kumaXNUMX, kune husiku hwekonzati yedombo uko musikana akatsakatika. Husiku ihwohwo hwaivewo mugumo webhandi neboka reshamwari kubva Diego Letamendia, one nyeredzi yedombo kuramba uyo, mushure meizvozvo, akasiya ndokutanga rakabudirira solo basa. Mapurisa haana kuzombokwanisa kuwana kuti chii chakaitika Lorea, musikana asipo uye musikana waDiego, uyo anga asiya konzati nekukurumidza.
Izvozvi zviripo, uye tichiziva kuti imwe yenhengo dzeboka inofa mu moto unoshamisa, Diego achafunga kudzokera kuIlumbe. Kubatanidzwazve neshamwari dzekare kuchave kwakaoma uye, mukuwedzera, iko zvino kuri kufungidzirwa kuti uyu moto pamwe waive usina kuita netsaona.
Kusakwana kusakwana - Roberto Lapid
Iye munyori weArgentina Roberto Lapid anopa ino nhoroondo inoenderana nezviitiko chaizvo nezve hupenyu hwa Hedy lamarr, kwete chete mutambi uye nyeredzi yemamuvhi, asi mukadzi akanaka uye anopenya, kiyi munhoroondo yezana ramakore rechiXNUMX. Pamusoro pebasa rake remufirimu, akadzidza huinjiniya uye akaumba uye akabvumidza a kutaurirana system kuineideside torpedoes uye kuona hukama pakati pevatsigiri panguva yehondo. Icho chiri pahunyanzvi uhu system yatinoshandisa nhasi yenharembozha, Wi-Fi, Bluetooth uye GPS yakavakirwa.
Saka isu tine Friedrich Mandl, wechidiki weAustria anotora baba vake vakaparadza fekitori yezvombo uye mumakore gumi chete anokwanisa kuita imwe yemahombekombe makuru eEuropean. Asi achiona mutambi Hedwig Kiesler mune bhaisikopo inodanana naye uye vanoroora. Nekudaro, kana hukama hwacho hukadzikira nekuda kwegodo nekusatendeka, anomukiya mumuzinda wake muSalzburg.
Hedy achakwanisa kutiza uye vachatiza kuEurope. Iri pane yegungwa liner inoenda kuNew York kwaanosangana Louis B. Meyer, purezidhendi weMetro Goldwyn Meyer, uyo anobva amubatira nekumushandura kuva Hedy Lamarr.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Kusarudzwa kwemashoko ekugadzirisa aJune